Filtrer les éléments par date : dimanche, 17 décembre 2017
dimanche, 17 décembre 2017 23:00
Bekopaka: Taksiborosy notafihin’ny dahalo
Tao avaratry ny tanànan’Ankatrakatraka, 20km miala an’i Bekopaka (Antsalova) no nosakanan’ny dahalo ny fiara 4x4 manao taksiborosy, nitondra olona 10 avy ao Bekopaka hiazo an’i Belo sur Tsiribihina, androany alahady 17 desambra tamin’ny 10ora maraina, rehefa nandeha mora tamin’ny lalan-dratsy.
Nisy Zandary avy nanao “escorte” fiaran-dry mopera ho any Antsalova no tafaradia tamin’ity taksiborosy ity, rehefa handeha hody ao Andimaka, izy no nitifitra avy hatrany raha vao nahatsikaritra ireo mpanakan-dalana namahana ny basy teny an-tanan’izy ireo. Vaky nandositra ireo mpanakan-dalana, tsy hay na maty na naratra.
Afaka nanohy ny dia tsy nisy olana ilay taksiborosy taorian’izay, ary tonga soamantsara tao Belo sur Tsiribihina.
dimanche, 17 décembre 2017 22:07
Mahabibo - Mahajanga: Mpangalatra finday niharan’ny fitsaram-bahoaka
Lehilahy iray tsy mbola mahatsiaro tena noho ny vono nataon'ny Fokonolona azy teny Mahabibo Mahajanga androany alahady 17 desambra tamin'ny valo ora alina.
Nangalatra finday tamina tovovavy kely iray izay nipetrapetraka teo an-tokontany izy. Niatso vonjy ilay lasibatra ka raikitra ny fifanenjehana. Teny Ambovoalanana vao tratran'ireo mpanenjika ity mpangalatra ity ary samy nidaroka avokoa ny rehetra.
Tonga malaky ny mpitandro ny filaminana ka nitondra ilay lehilahy tany amin'ny hopitaly. Tamin'ny fotoana nahatongavanay teny amin'ny Hopitalibe PeZaGa Androva, mbola anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena ilay mpangalatra.
Nanamafy ireo mponina teny amin'ny manodidina fa efa fanaon'ity tovolahy ity ny fanendahana sy fangalarana ka tsy nandeferan'ny olona intsony. Tamin'ny androany, efa olona telo no nitaraina fa very finday teo amin'ny manodidina ny nahavoa ity tovovavy iray ity.
dimanche, 17 décembre 2017 21:05
Maromandia: Dahalo 9 matin’ny Fokonolona
Nitrangana asan-dahalo tao Bejofo, Kaominina Maromandia, Distrikan'Analalava ny alin’ny alarobia hifoha ny alakamisy 14 desambra lasa teo. 13 lahy ireo jiolahy nanafika, niaraka tamin’ny basim-borona.
Tsy nilavo lefona ny Fokonolona fa nanohitra ireto dahalo ireto. Mafy ny fifandonana. Maty ny 9 tamin’ireo dahalo, fianakaviana iray ny 6 amin’ireo, tafatsoaka kosa ny 4.
Voalaza fa avy any Ambodimanga Mariarano tanàna any amin’ny faritra mampisaraka ny Distrikan’i Bealanana amin’ny Distrika Befandriana Avaratra ireto olon-dratsy ireto.
Eo ampelan-tanan’ny Zandarimaria ny raharaha ankehitriny.
dimanche, 17 décembre 2017 21:02
Gendarmerie: Décès du Général de division Randrianazary
Le Général de division Randrianazary est décédé ce dimanche à 4h30 du matin des suites d’un cancer pulmonaire. Il était SEG (Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie Nationale) de 2010 à 2014. Il fait partie de la Xème promotion de l’Académie Militaire d’Antsirabe, Randrianazary a succédé au Général de division Ravelomanana Claude.
Il était Directeur Général du Central Intelligence Service (CIS), il était aussi officier Général 1er adjoint au Commandant de la Gendarmerie Nationale
dimanche, 17 décembre 2017 20:54
Kamiao miaramila lasan’ny rano: Razana telo hita, enina tsy hita popoka tany Ikongo
Mbola eo ampikarohana ireo mpitandro ny filaminana enin-dahy tao anaty kamiao, nentin’ny rano teo ampitana ny “radier” omaly sabotsy tamin’ny fiandohan’ny tolakandro ny Fokonolona ao Ambinanitromby, Kaominina any amin’ny 28km tsy hahatongavana ao an-drenivohitry ny Distrikan’Ikongo hatramin’ny androany.
Kamiao nitondra mpitandro ny filaminana, nahitana Miaramila, Zandary ary Polisy, izay andiany faharoa nirahin’ny governemanta hamerina ny fandriampahalemana ao Ikongo taorian’ny rotaka ka nahavaky ny fonja tao an-toerana ny talata 12 desambra ary nitsoahan’ireo voafonja miisa 95, ary koa haka ireo mpiasan’ny Fitsarana any an-toerana, nahazo fandrahonana tamin’ny Fokonolona ka voatery niafina izy ireo.
dimanche, 17 décembre 2017 20:51
Zandarimaria: Nodimandry ny Sekretetam-panjakana teo aloha, Jeneraly Randrianazary
Nindaosin’ny fahafatesana androany maraina, teo amin’ny faha-63 taonany, ity Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria teo aloha ity, Jeneraly Randrianazary, rehefa nolazoin’ny aretina homamiadan’ny havokavoka. Nisy fotoana efa nitsaboany tena tany Alemaina.
dimanche, 17 décembre 2017 20:02
Toliara: Notokanana ny jardin de la mer
Tao anatin'ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny TVM dia notokanana ihany koa ny Jardin de la Mer taty Toliara.
dimanche, 17 décembre 2017 16:28
Toliara: Fankalazana ny faha 50 taonan'ny TVM sa fampielezan-kevitra
Nandritra ny fotoam-pankalazana ny faha 50 taonan'ny Televizionina Nasionaly TVM dia kabary fampielezan-kevitra no tena nisongadina nataon'ny filoha Rajaonarimampianina ary miezaka mafy maka ny fon'ireo mponina eto Toliara.
Nambarany tamin'izany moa fa efa reny fa tsy mandeha efa herin'andro ny rano eto Toliara, ary dia nampanantena izy fa ho voavaha ny olana satria dia hisy fotodrafitr'asa maharitra ho ataon'ny fitondrana amin'izany.
Nangataka tehaka moa izy tamin'izany fa zara raha nino azy ireto olona niatrika azy, nanezaka nanofahofa tanana, fa dia nojeren'olona fotsiny ihany.